112 jir ku guursaday Guriceel gabadh 17 jir ah oo uu ka waynyahay 95 sano. – Radio Daljir
Guriceel, Oct 29 – Arooskii ugu layaabka badnee ee ka dhaca waddanka Soomaaliya in ka badan qarni inta la ogyahay ayaa dhex maray nin 112 sanadood jir ah iyo gabadh 17 jir.
Boqollaal qof ayaa iskugu soo xoomay si ay uga qayb qaataan arooskaas oo si heer sare ah loo soo agaasimay oo shalay ka dhacayay magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ee badhtamaha Soomaaliya.
Caruuska 112 jirka ah waxaa la yidhaahdaa Axmed Maxamed Dhoore, waxana uu guursaday gabadh uu ka wayn yahay 95 sanadood oo 17 jir ah lana yidhaahdo Safiya Cabdulle.
Axmed Maxamed Dhoore waxa uu sheegey in uu gabadhan yar ee uu guursaday isha ku hayay illaa intay ka soo koraysay, ?Allaa igu caawiyay in aan xaqiijiyo riyadaydii? ayuu yidhi Dhoore, waxana uu intaa ku daray in aanuu khasbin ee uu khibraddiisa uu ka dhaxlay da?diisa wayn uu u adeegsaday in uu ku beero jacayl iyo kalsooni, kaddibna waxa ay isku raaceen in ay isguursadaan.
Ehelada gabadha caruusadda ah ayaa sheegey in ay inantooda si wayn ula dhacsantahay ninka ay is calmadeen.
Axmed Maxamed oo ah ninka da?da wayn ee qarniga ka wayn ee guursday ayaa waxa uu hore u soo dhalay 18 caruur ah oo ay u kala dhaleen 5 xaas oo hore oo uu guursaday, waxana mid ka mid ah carruurtiisa oo imika ku sugan guri Ceel oo ka qayb galay arooska aabihii uu jiraa 80 sanadood.
Safiya Cabdulle waxa ay arooskeedii ugu horeeyey si farxad leh kula wadaagaysaa Axmed Maxamed Doore oo ay u noqotay haweeneydii 6aad ee uu guursado.